DOWNLOAD ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP SCANJET 3800 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka HP Scanjet 3800
Maka ọrụ zuru oke nke nyocha ahụ chọrọ software pụrụ iche na ejikọ ya na kọmputa. Ọ dị mkpa ịghọta ụzọ na ebe ọ kachasị mma ibudata onye ọkwọ ụgbọala ka ọ ghara imerụ ngwaọrụ na usoro ahụ.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi wụnye onye ọkwọ ụgbọala maka nyocha na ajụjụ. Ụfọdụ n'ime ha nwere njikọ na saịtị ndị ọrụ, ebe ndị ọzọ na-eme atụmatụ iji mmemme ndị ọzọ. Ọ dị mkpa ịghọta usoro nke ọ bụla iche.
Usoro 1: weebụsaịtị Weebụ
Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịga na ebe nrụọrụ weebụ HP, n'ihi na n'ebe ahụ ị nwere ike ịchọta onye ọkwọ ụgbọala nke ga-agbaso ihe nlereanya ngwaọrụ.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-emepụta ihe.
Na menu, megharịa cursor ka "Nkwado". A na-emepe menu ihe nkpuchi nke anyi choro "Software na ndị ọkwọ ụgbọala".
Na ibe nke mepee, enwere ubi iji tinye aha nke ngwaahịa a. Anyị na-ede "HP Scanjet 3800 Scanner", anyị pịa "Chọọ".
Ozugbo nke a gasịrị, anyị na-ahụ ubi ahụ "Ọkwọ ụgbọala", gbasaa taabụ ahụ "Ọkwọ ụgbọala ọkpụkpụ" ma pịgharịa bọtịnụ ahụ "Download".
N'ihi omume dị otú ahụ, a na-ebudata faịlụ ahụ na .exe mgbati. Gbaa ya.
Ịwụnye onye ọkwọ ụgbọ ala ga-abụ ezigbo ngwa ngwa, mana nke mbụ, ị ga-ebugharị ihuenyo mmeta nke Wizard Wụnye.
Mwepu na-ekpuchi ga-amalite. Ọ na-ewe nanị sekọnd ole na ole, mgbe nke ahụ gasịrị, windo njikere ịkwọ ụgbọala ga-apụta.
Nyocha a nke usoro a agwụla.
Usoro 2: Mmemme nke atọ
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na ebe nrụọrụ weebụ ndị na-emepụta adịghị ekwe ka ị budata ngwanrọ dị mkpa, ma ị ga-achọ ya na ebe nrụọrụ weebụ. Maka nzube dị otú a, enwere ngwa ndị pụrụ iche na-achọpụta ọkwọ ụgbọala dị mkpa, na-ebudata ya ma wụnye ya na kọmpụta ahụ. Ọ bụrụ na ị maghị mmemme ndị ahụ, mgbe ahụ, anyị na-atụ aro ka ị gụọ otu isiokwu dị ebube, nke na-agwa ndị nnọchiteanya kachasị mma nke nke a.
A na-ewere Nyocha DriverPack usoro kachasị mma maka imelite ọkwọ ụgbọala. Nke a bụ ngwanrọ ebe ọ dịghị ihe ọ bụla achọrọ n'aka gị ma ọ bụghị njikọ intaneti na ntanetị igodo. Nnukwu, data nchekwa data na-aga n'ihu na-agụnye ọkwọ ụgbọala ịchọrọ. Ọzọkwa, e nwere nkewa site na sistemụ arụmọrụ. Ọ gaghị esiri gị ike ịchọta onye ọkwọ ụgbọala, dịka ọmụmaatụ, maka Windows 7. Plus, interface dị mma na obere "mkpofu" na-enweghị isi. Ọ bụrụ na ị maghị otú e si eji ngwa dị otú ahụ, gee ntị na isiokwu anyị, ọ na-akọwa ya n'ụzọ zuru ezu.
Usoro 3: NJ ngwaọrụ
Ngwa ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ pụrụ iche nke ya. Ịchọta onye ọkwọ ụgbọ ala bụ ọrụ ị na-enweghị ike itinye mgbalị ọ bụla. Maka HP Scanjet 3800 nọmba ndị a dị mkpa:
USB VID_03F0 & PID_2605
Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere otu isiokwu na-akọwa ọtụtụ n'ime nuances nke nchọta dị otú ahụ.
Gụkwuo: Chọọnụ ndị ọkwọ ụgbọala site na NJ hardware
Usoro 4: Standard Windows Ngwaọrụ
Ụzọ kacha mma maka ndị na-enweghị mmasị ibudata ihe omume na nleta saịtị ga-abụ nke a. Iji mee ka ndị ọkwọ ụgbọala ahụ melite ma ọ bụ wụnye ha site na iji ngwaọrụ Windows, ị chọrọ njikọ ịntanetị naanị. Na mgbakwunye, ọ dị mfe, ma ọ ka mma ịgụ ntụziaka na njikọ dị n'okpuru ebe a na-akọwa ihe niile n'ụzọ zuru ezu.
Gụkwuo: Na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala site na iji Windows
Nke a mejuputara ụzọ ọrụ iji wụnye HP Scanjet 3800 ọkwọ ụgbọ ala.